Ogaden News Agency (ONA) – Breaking News: Cabdi Gamaadiid iyo Khadiir oo lagala baxay Hodheeladii ay Addis ka daganaayeen
Breaking News: Cabdi Gamaadiid iyo Khadiir oo lagala baxay Hodheeladii ay Addis ka daganaayeen
Posted by Daljir	/ December 17, 2013
Magaalada Addis ababa ayaa xalay hotalkii ay jiifeen laga qab qabtay xildhibaan Cabdi Gamadiid iyo Khadiir Cabdiraxman. Xildhibaan Cabdi Gamaadiid ayaa mudo yar oo saacado ah wuxuu kuxidhnaa guriga martidida ee u dagan yahay Cabdi Iley kuna yaala xaafada Rwanda agagaarka Masqal flower.
Xildhibanka ayaa kadibna saaka usoo baxay magaalada Jigjiga una sii gudbay magaalada Dhagaxbuur oo uu hawlgal nabadgalyo utagay.
Khadiir Cabdiraxmaan ayaa isaga waxaa xalay habeenimo kasoo qaaday Hotelka staffka Cabdi Iley waxaana lakeenay magaalada Jigjiga warar hordhaca ayaa sheegaya in uu weli kuxidhan yahay guriga martida ee Cabdi Iley xaafada o6 oo lala sugayo imaanshaha Cabdi Iley oo Addis ababa kumaqan ahaana ninka amarkiisa xagaas lagaga soo qabtay.
Dambiilayaal Cabdi Iley iyo Cabdulaahi Ethiopia ayaa Khadiir ku eedeeyey in uu baxsanayey kadib markii uu kahadhay koox masuuliyiinta gobolka dhagaxbuur ah oo nabadgalyo loo diray oo uu Khadiirna kamid ahaa, Khadiir ayaa halkii uu uga bixi lahaa hawlgalkaas wuxu ubaxay Addis Ababa kadibna waxaa kawar helay Dhiigyacab Cabdi Iley oo halkaas kusugan.
Ilaa iyo hadda lama garan karo in Khadiir lageeyn doono jeelka iyo in halkaas laga siideyn doono marka uu yimaado Cabdi Iley.